i-ukzn nesikhwama sokusiza abakhahlanyezwa yi-covid-19 - Ilanga News
Home Izindaba i-ukzn nesikhwama sokusiza abakhahlanyezwa yi-covid-19
i-ukzn nesikhwama sokusiza abakhahlanyezwa yi-covid-19
ISEKELA leShansela lase-University of KwaZulu-Natal, uSolwazi Nana Poku. ISITHOMBE: YINQOLOBANE YELANGA
UNIKELE ngengxenye yomholo wakhe wezinyanga ezintathu umphathi wase-University of KwaZulu-Natal (UKZN) uSolwazi Nana Poku esikhwameni esisungulwe yile nyuvesi sokubhekelela abaxakekile njengoba kuhlasele iCovid-19 umhlaba wonke.
Lolu hlelo lusungulelwe izitshudeni zakule nyuvesi nezisebenzi zakhona emizamweni yokubhekelela lesi simo ngenhloso yokwelula isandla.
USolwazi Poku usenxuse abaxhasi abangosomabhizinisi nezinkampani ezizimele ukuba baphonse esivivaneni ukuze kulwiswane nobubha okubhekenwe nabo ngalesi sikhathi sokumiswa kwezwe.
Unxuse nezitshudeni ezazifunda kulesi sikhungo eminyakeni edlule ukuba zibambe iqhaza ekusizeni inyuvesi kanjalo nabangani benyuvesi.
UNkz Nomah Zondo oyibamba lomkhulumeli kulesi sikhungo, uthi banethemba lokuthi umqondo abaqhamuke nawo uzokwenza ushintsho olukhulu esikhungweni.
“Kunabantwana abaqhamuka emindenini exakeke kakhulu, engakwazi ukuthola imali.
“Njengoba sekuhlasele nalesi simo sokuthi kungasetshenzwa, kwenza ukuxakeka kube kukhulu kakhulu. Yingakho sibone kungcono sisungule lesi sikhwama esizokwenza ushintsho,” kusho uNkz Zondo.
Uthi le nyuvesi inabafundi abalinganiselwa ku-50 000 nezisebenzi ezibalelwa ku-5000 abangahlomula kulesi sikhwana. Uveze ukuthi kwabanye kuzocaca usizi emuva kokuphela kwesinqumo sokuvalwa kwezwe, okunye okungagcina ku-phazamisa ukufunda kahle kwabafundi.
“Abantu sibanxusa ukuba banikele ngokudla okungaboli, imisubelo (pads) nokunye,” kusho uNkz Zondo.
Uthi lolu hlelo luzokwethulwa ngokusemthethweni kuzona zonke izimpiko zalesi sikhungo.
Uthi kubalulekile ukubambisa-na kulesi simo njengoba iCovid-19 ibhokile.
Unxuse nokuthi abafundi nezisebenzi base-UKZN ukuba balalele imiyalelo kahulumeni yokuthi kuhlalwe ekhaya ukuze kugwe-nywe ukuthelelana ngegciwane.
Ngeminye imininingwane kwabafisa ukwelula isandla esikhwameni senyuvesi sokuxhaswa kwabafundi, kungavakashelwa kwi-website ethi: www.ukzn.ac.za
Previous articleOkungakusiza uma udilizwa
Next articleAbalimi ekhaleni lokusiza abakhahlanyezwe yi-covid-19